Iskoorada Uri waa iska socdaan markaana wuxuu noqday filimka ugu horeeyay Jimcadiisa shanaad 2 Crore gaaro! – Filimside.net
Iskoorada Uri waa iska socdaan markaana wuxuu noqday filimka ugu horeeyay Jimcadiisa shanaad 2 Crore gaaro!
February 9, 2019 Zakarie Abdi
Filimka Uri – The Surgical Strike wuxuu isku badalay iskoor sameeye haatana waxaa si rasmi ah loogu diiwaan galiyay inuu yahay filimka ugu horeeyay ee Jimcadiisa shanaad 2 Crore lacago ah gaaro asigoo keenay 2.25 Crore (Trade Figure) Jimcadiisa shanaad.
Uri wuxuu cagta mariyay iskoorkii Bahubali 2 weliba 50 Lakh ayaa la dheeraaday Bahubali 2 Jimcadiisa shanaad ganacsigii uu sameeyay waana arin aan marnaba lagu fikirin in dhawaanahan la heli doono filim iskoorada Bahubali 2 jebin karo Bollywood-ka la imaan doonaan.
Haatan shaki kuma jiro Uri – The Surgical Strike inuu iskoor cusub soo kordhin doono todobaadkiisa shanaad marka uu dhameesto marba haddii dar dartaan aadka u sareyso ku bilaawday Jimcadiisa shanaad.
Filimka Uri haatan wuxuu soo xareeyay 202.50 Crore (Trade Figure) ganacsigiisa guud canshuurta kadib ama lacagaha nadiifka ah haatana lama sadaalin karo halka uu cimri ahaantiisa ku istaagi doono balse waxay u badan tahay 225 Crore inuu ka tilaabsan doono.
Uri wuxuu fursad u heestaa todobaadkiisa shanaad sedexda maalmood ugu horeyso ganacsigiisa inuu 10 Crore dhaafo taariikh ahaana Bahubali 2 ayaa ugu badnaa oo todobaadkiisa shanaad sedexda maalmood ugu horeyso kusoo xareeyay 8.50 Crore.
Fadlan hoos kaga bogo Uri iyo ganacsiga uu sameeyay mudo 29-maalmood ah sida ay shabakada ay Boxoffice India (BOI) soo daabacday:
Wadarta Guud – 202.60 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 431